ကုူညီကြပါဦး..အဒေါင်းတက်ကော့လို့ — MYSTERY ZILLION
(:106:laptop.compaq presario 2800.vga driver လိိုနေလို့ ဒေါင်းလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်...ကူညီကြပါဗျာ....နောက်ပြီး window language ကို ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲဗျာ့
ဂျပန် စာထွက်နေလို့.....အင်္ဂလိပ်လို ပြောင်းချင်တာ ပါ.....DRIVER ့ကိုတော့ကူညီကြပါဗျာ...နော်..
ကျွန်တော် gmail က [email protected] ကို ပို့ပေးလို့ရမလားဗျာ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..ကူကြပါနော့်...:((
လင့်ခ်လေးပေးလေ.. ဒေါင်းလို့ရရင် ကြိုးစားကြည့်ပေးမယ်.
ကူညီပါနော်...language change တာပါ ကူညီပေါ့နော့် ကျေးဇူးပါဗျာ..
language ပြောင်းဖို့က control panel ထဲက Regional and language setting>advanced>japanese(change to) English and >default user account settings (check box) on ...
ရဘူးဗျ...ကျွန်တော့် window က ဂျပန် window ဖြစ်နေတယ်.. အကိုတို့ ပြောသလို ထဲမှာ english to japan မပါဘူး...အကုန်ဂျပန် ဖြစ်နေတယ်....ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ..:77:...
what version of Windows ? If you are windows vista,Windows Vista Ultimate can change language and other can't do it. If you want to change, format it and install new Windows with English.
rocker wrote: »
Language ကိုတော့.. Control Panel ကိုသွား..
ပြီးရင် အဲဒီမှာ.. Reginonal and Language Option ဆိုတာရှီတယ်.. အဲဒါကို double click နဲက၀င်.
Reginonal and Language Option box လေးကျလာမယ်... အဲဒီထဲက.. Language Menu ကိုသွား.. ပြီးရင် Details ကိုထပ်၀င်ပြီး English(UnitedSates)-US ကို ရွေးပြီး. Apply လုပ်ရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်.....
ဘာရိုက်ရိုက် Japan စာပဲထွက်နေရင်.. Language bar မှာ EN ကိုပြောင်းပြီးသုံးကြည့်ပါလား.. language bar မှာ.. EN မရှီရင်.တော့.ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၀င်ပြီး.. English(UnitedSates)-US ကို Add လုပ်ပေးရမယ်... ကိုက Japan ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာ.. Remove လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်.. လိုတဲ့အခါမှပြန်ထည့်နိုင်ပါတယ်..
အဆင်မပြေရင်.. အစ်ကိုဆီက ဖြစ်တဲ့ပုံကိုပြောပြပေးပါ... .
ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတာက russia window ဖြစ်နေတယ်ဗျာ အင်္ဂလိ၀င်းဒိုးဘယ်လိုပြောင်း၇မလဲဟင် window တင်ပြီးမှဒေါင်းထားတာ ၇ု၇ှမှန်းသိတော့တယ် ။
ဘယ်လိုလုပ်၇င်ကောင်းလဲဟင် (ဆိုင်သွား ခွေသစ်သွား၀ယ်လို့ကြောကြနဲ့နော် :68::68:):D:D
ကျေးဇူးပါဗျာ...ဒေါင်းလို့တော့ရပြီ လုပ်လိုရမရသာ ကျန်တော့တယ်....ကျေးဇူးပါ..နောက်လည်းအားပေးပါဦးနော့:6: